Thursday May 04, 2017 - 12:56:32 in Wararka by Super Admin
Maalmo aan fogeyn ayaan socdaal gaaban ku tagay deegaanno katirsan Gobollada Bay iyo Bakool oo runtii kamid ahaa gobollada ugu daran oo ay abaartu ku dhufatay marka laga reebo gobollada Waqooyi Galbeed iyo Waqooyi Bari.
Koonfurta iyo Bartamaha dalka Soomaaliya abaarta ugu daran waxay ka dhacday Bay iyo Bakool sidaas oo ay tahay waxaa badbaaday kumanaan neef oo aan dhiman balse iyagoo caato wayd ah ayay hadda heleen Biyo iyo Baad.
Haddii Alle idmo xoolahaas badbaaday bilo kadib lacag fiican ayay goyn doonaan marka ay daaqaan dhirta qoyan.
Dhul isagoo abaar ah aan bil ka hor ku safray ayaan soo maray iyadoo xareeddu warantahay waddooyinka oo sayma roob ay haleeleen, runtii waan garan waayay dhulka oo isbedel dhan walba ah ku yimid geedihii boorku qariyay xilligii abaarta ee la mooday in ay qalaleen ayaa hadda ah kuwa cagaaran oo ildoogsi qurux badan leh.
Wadada hareereeda waxaa yiillay Bakhtiga xoola isugu jiray Ari,lo’ iyo Geel xilligii abaarta balse markii roobku da’ay bakhtiga xoolaha waxaa xaaqay biyaha xareedda.
Wadada hareeraheeda waxaa lagu arkayaa xoolo daaqaya dhirta nuucyadeeda kala duwan, dadku waxay kuu sheegayaan in Gugan uu yahay mid barwaaqo marka loo eego sida xowlliga ah ee Roobku ku da’ayo iyo biyaha xareedda oo waraha buuxiyay.
Haddii Alle idmo waxaan booqan doonaa gobollo kale oo abaarta kadib Roobsaday noloshuna dib usoo laabatay.
W/D Hilaal Colaad Toosane
Hoos Ka Daawo Sawirrada Socdaalkeygii Bay iyo Bakool xilligii Abaarta iyo Roobka Kadib.
FG: Sawirrada xoolaha baqtiyay qaarkood waxaan kasoo xigtay Channel4
Sawirka Buurta Doodaale oo Roobsatay abaartii kadib
Sawirkaan waa isla Buurta Doodaale xilligii Abaarta daran ay Soomaaliya ka jirtay
Sawirrada Hoose waxaa laqaaday xilligii abaarta daran ay kajirtay deegaano katirsan gobollada Bay iyo Bakool